Shaacinta | Martech Zone
Martech Zone waa baloog uu abuuray Douglas Karr oo ay taageerayaan kafaala-qaadayaasheena. Su'aalaha ku saabsan balooggan, fadlan nala soo xiriir.
Boggan wuxuu aqbalaa foomamka xayeysiinta lacagta, kafaalaqaadka, gelinta lacag bixinta ama qaababka kale ee magdhowga.
Balooggan ayaa lacag kahelaya qaar ka mid ah xiriiriyeyaashiisa.
Boggan wuxuu u hoggaansamayaa ereyada afka ee suuq geynta. Waxaan aaminsanahay daacadnimada xiriirka, ra'yiga iyo aqoonsiga. Magdhowga la helay wuxuu saameyn ku yeelan karaa waxyaabaha xayeysiinta ah, mowduucyada ama qoraallada lagu sameeyay balooggan. Mawduucaas, booska xayeysiinta ama boostada ayaa si cad loogu aqoonsan doonaa inay yihiin waxyaabo la bixiyay ama la kafaala qaaday.
Mulkiilaha (yaasha) balooggan ayaa magdhow la siinayaa si loo bixiyo ra'yi ku saabsan alaabada, adeegyada, bogagga internetka iyo mowduucyo kale oo kala duwan In kasta oo milkiilaha (yaasha) balooggan uu magdhow ka helayo farriimahayaga ama xayeysiimahayaga, waxaan had iyo jeer siinnaa fikradaheenna daacadda ah, natiijooyinka, aaminsanaanta, ama khibradaha mowduucyadaas ama alaabooyinkaas. Aragtida iyo fikradaha lagu muujiyey balooggan waxaa iska leh kuwa wax qora ee wax qora. Sheegasho kasta oo shey, tirakoob, xigasho ama matalaad kale oo ku saabsan wax soo saar ama adeeg waa in lala hubiyaa soo saaraha, adeeg bixiyaha ama kooxda ay khuseyso.
Balooggan waxaa ku jira waxyaabo laga yaabo inay soo bandhigaan khilaaf xiise leh. Mawduucan marwalba waa la aqoonsan doonaa.